news नेपालसुगरलाई जरैदेखि हटाउने सजिलो उपाय र आर्युवेदिक औषधी ! पढौं र जानकारीको लागी सेयर गरौं - news नेपाल
सुगरलाई जरैदेखि हटाउने सजिलो उपाय र आर्युवेदिक औषधी ! पढौं र जानकारीको लागी सेयर गरौं
२०७९ असार ६, सोमबार १४:३०
सुगरहलाई जरैदेखि हटाउने सजिलो उपाय र आर्युवेदिक औषधी ! पढौं र जानकारीको लागी सेयर गरौं
मधुहेको लेभल कति हुनुपर्छ ? बिहान खाली पेटमा जाँच गर्दा ब्लडमा सुगरको मात्रा ७० देखि १ सय १० मिलिग्राम छ भने यसलाई सामान्य ब्लड सुगर लेभल भनिन्छ । खाना खाएको २ घण्टापछि जाँच गर्दा ब्लड सुगर लेभल १ सय १० देखि १ सय ४० सामान्य हो । यो स्तर १ सय ४० देखि १ सय ७० मा पुग्छ भने अत्तालिनु पर्ने केहि छैन ।
किनभने यत्तिका ब्लड सुगर लेभल नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । जब सुगर लेभल २ सयदेखि ३ सयभन्दा बढी हुन्छ भने, उपचार खाँचो हुन्छ । ब्लड सुगर लेभल ४ सय मिलिग्रामभन्दा बढी भयो भने यो गंभिर समस्या हो । यदि समयमै मधुमेहलाई नियन्त्रण गरिएन भने यसले अन्य रोगलाई जन्म दिन्छ ।